Izingxenye ezimbili ezinkulu zomugqa wokukhiqiza ongaphothi we-spunbond
Kulezi zinsuku, ukusetshenziswa kwezindwangu zokulingisa ezingasuki ezilukiwe kusesejwayelekile. Ngaphezu kwezingubo esivame ukugqoka, izindwangu ezingalukiwe ezisontwe nazo ziyadingeka kumaski athandwayo. Imakethe enkulu yezindwangu ezingezona ezelukiweyo ze-spunbond iphinda inikeze indwangu yamanje ye-spunbond non-woven pr ...
Izinzuzo zemishini engalukiwe?
Imikhiqizo eminingi isebenzisa izindwangu ezingalukiwe, ezinjengamanabukeni asetshenziswa yizingane, nemikhiqizo yendwangu njengamamaski. Kunezinzuzo eziningi zezindwangu ezingalukiwe. Inokuphefumula okuhle komoya nomsebenzi omuhle wokumunca amanzi. Ngakho-ke, izindwangu ezingalukiwe zisetshenziswa ezinhlakeni ezahlukahlukene. Noma kunjalo, ngoba ...
Iyini indwangu ye-PP polypropylene spunbond non-woven
Imboni yezindwangu iyimboni enkulu ngokuqhathaniswa, futhi kunemishini nemishini eminingi kuyo. Vele, ngenxa yemisebenzi ehlukene esetshenzisiwe, imishini ngayinye kanye nemishini ethile kubhekiswe kuyo. Kukhona umkhiqizo odume kakhulu emakethe, okungukuthi indwangu ye-PP polypropylene spunbond non-woven is ...
Amathegi ashisayo, Hot Products, Ibalazwe amagama okuhlola, Amagama angukhiye A, Amagama angukhiye B,